Baiboly pejy 15 - Ny Baiboly
Voalohany < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Manaraka Farany
Jenezy toko 26 (tohiny)
9Dia niantso an'Isaaka izy, ka nanao hoe: Hita fa vadinao mihitsy izy. Ka ahoana no nilazaonao hoe: Anabaviko io. Ary hoy Isaaka taminy: Satria, hoy aho anakampo, sao dia maty aho noho ny aminy. 10Ka hoy Abimeleka: Ahoana no nanaovanao izany taminay? Fa nety ho nisy nandeha tamin'ny vadinao ny olona ka ho nampiditra fahotana taminay hianao. 11Dia nomen'i Abimeleka teny ny vahoakany rehetra, nataony hoe: Izay mikasika io lehilahy io na ny vadiny dia vonoina ho faty. 12Ary Isaaka namafy tamin'izany, ka nahavokatra avo zato heny izy tamin'io taona io. 13Nambinin'ny Tompo ka tonga mpanankarena ralehilahy; ary nandroso nandroso ihany izy nampitombo ny hareny, mandra-pahatongany ho manana harena tsy hita noanoa. 14Nananany andiany maro ny biby fiompy na lehibe na kely; ary nananany betsaka koa ny mpanompo; ka velom-pialonana azy ny Filistina. 15Nototofan'ny Filistina nofenoiny tany avokoa ny lavaka fantsakàna nohadin'ny mpanompon-drainy, fony fahavelon'i Abrahama rainy. 16Ary Abimeleka nanao tamin'Isaaka hoe: Mandehàna miala aty aminay hianao, fa efa mahery lavitra noho izahay. 17Dia nandeha Isaaka ka niorin-day teo an-dohasahan'i Jerara sy nonina teo.
34Rahefa efa-polo taona Esao dia nanambady an'i Jodita, zanak'i Beerì, Heteana, sy Basemata, zanak'i Elona, Heteana. 35Nahasorisorena mafy an'Isaaka sy Rebekà izy ireny.
18Dia nankao amin-drainy Jakoba, ka nanao hoe: Dada ô! - Inty aho, hoy Isaaka, iza moa hianao anaka? 19Ary hoy Jakoba tamin-drainy: Izaho no Esao, zanakao lahimatoa. Vitako ny nasainao nataoko ka masìna hianao, miarena ary mipetraha hihinana ny hazako, mba hitsofan'ny fanahinao rano ahy. 20Fa hoy Isaaka tamin-janany: Ahoana no dia nahazoanao faingana toy izany, anaka? Ka hoy Jakoba: Iaveh Andriamanitrao no nahatonga azy teo anoloako. 21Manatòna àry, hoy Isaaka, mba hitsapako anao kely, na hianao tokoa no Esao zanako, na tsia. 22Dia nanatona an-drainy Jakoba; ka hoy Isaaka nony nitsapa azy: Ny feony dia feon'i Jakoba, fa ny tànany dia tànan'i Esao. 23Tsy nahalala azy izy, satria voloina tahaka ny an'i Esao, rahalahiny, ny tànany, ka dia nitso-drano azy.
Pejy: Voalohany < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3949 seconds